La Vivagna - Indlu yokujonga ulwandle phakathi kwemithi yomnquma
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguGiulia
Indawo entle kunye nexhotyisiweyo enamagumbi amabini ejikelezwe yimithi yomnquma kufutshane neyona ndawo idumileyo yabakhenkethi baseLigurian: Chiavari, Sestri Levante, Zoagli, Portofino, Santa Margherita, Le Cinque Terre. Ilungele izibini okanye iintsapho ezincinci ezifuna ukonwabela ukuhlala ezijonge ulwandle kunye neentaba ezijikelezwe yindalo. Ukunikezelwa kwendawo yendawo yokuhlala, kunokwenzeka ukuba ufikelele kuhola wendlela, umbindi weChiavari, ulwandle kunye nesikhululo sikaloliwe ngemizuzu eyi-9 ngemoto. Ikhowudi 010029-LT-0010
Indawo yokuhlala imelwe sisihlomelo sendlu enkulu. Ukufika endlwini, emva kwesango eliphambili kunye neendawo zokupaka ezizimeleyo ezinikezelwe kuwe, hamba kunye ne-avenue enemithi ehlanganiswe nemisipres kunye nemithi yomnquma. Indawo yokuhlala ifikeleleka ngokulula zombini ngezinyuko kunye ne-driveway ezimeleyo, ngaphandle kwemiqobo yolwakhiwo, ilungele ukudlula kwiisutikheyisi kunye nabahamba ngeenyawo. Itafile yegadi phantsi kwe-wisteria pergola ifumaneka kwiindwendwe ngokupheleleyo kwisidlo sakusasa sangaphandle esihle. Ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zethu zinokonwabela ngokupheleleyo ubuhle bale ndawo, kuya kwenzeka ukufikelela kwiindawo ezahlukeneyo eziqhelekileyo: ithala elijonge ulwandle kunye neentaba apho unokuncoma ukutshona kwelanga okuqaqambileyo, ipatio enetafile enkulu phambi kwendlu enkulu. apho zidla kwaye ndawo kwiindawo kunye ibrayi lwezitena encinane. Ukuze ufikelele kwindawo yokuhlala kufuneka ube yimoto.
ILeivi yiperile encinci yeLigurian ebekwe phakathi kolwandle kunye neenduli zemithi yomnquma. Kufuphi kakhulu kwezona ndawo zidumileyo kwingingqi yethu, yindawo efanelekileyo kubo bonke abo bafuna ukuphumla bengqongwe yindalo kodwa bayonwabele ngokupheleleyo iRiviera kunye nolwandle lwaseLiguria.
Ngaphandle kokuba kuvunyelwene ngenye indlela, Ukungeniswa kunye nokuPhuma kufuneka kwenzeke ngexesha elisekwe ngaphambili njengoko asisoloko sikummandla osondeleyo wendawo yokuhlala.
Umthetho wesizwe ubonelela ukuba undwendwe ngalunye (kubandakanywa neentsana) luxhotyiswe ngesazisi okanye incwadana yokundwendwela PHANTSI KOBUMTHETHO ngenye indlela ngelishwa undwendwe alunakwamkelwa xa kungena. I-Leivi ifuna ukuba iindwendwe zihlawule irhafu yabakhenkethi (i-1.50 ye-euro ngomntu ngobusuku ngabunye), isixa-mali siya kuqokelelwa ngumamkeli-ndwendwe xa ufika kwaye emva koko ihlawulwe kumasipala.
Ngaphandle kokuba kuvunyelwene ngenye indlela, Ukungeniswa kunye nokuPhuma kufuneka kwenzeke ngexesha elisekwe ngaphambili njengoko asisoloko sikummandla osondeleyo wendawo yokuhla…
Inombolo yomthetho: 010029 - LT -0010
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Leivi